စိုက်လျော်ထားရတဲ့ သိန်းထောင်ချီတဲ့ငွေတွေ ပြန်ရလိုရငြား လုပ်မိလုပ်ရာအကန် လုပ်နေမိပြီဆိုတဲ့ မင်းသမီးကြီး သိင်္ဂီထွန်း – Maythadin
စိုက်လျော်ထားရတဲ့ သိန်းထောင်ချီတဲ့ငွေတွေ ပြန်ရလိုရငြား လုပ်မိလုပ်ရာအကန် လုပ်နေမိပြီဆိုတဲ့ မင်းသမီးကြီး သိင်္ဂီထွန်း
May Thadin | November 14, 2021 | Cele News | No Comments
စိုက်လျော်ထားရတဲ့ သိန်းထောင်ချီတဲ့ငွေတွေ ပြန်ရလိုရငြား လုပ်မိလုပ်ရာအကန် လုပ်နေမိပြီဆိုတဲ့ မင်းသမီးကြီး သိင်္ဂီထွန်း..
တစ်ချိန်က သရုပ်ဆောင်လောကမှာ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံလောက ကနေပရိသတ်အားပေးမှုတွေရရှိခဲ့တာကတော့ သိဂ်ီထွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ အမေခန်းတွေမှာ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ယနေ့တိုင် ပရိသတ်အားပေးမှုတွေနဲ့အောင်မြင်နေတာပါ။
သူမရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်လည်း အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေစုဆောင်းက စီးပွားရေးတွေကိုလည်းလုပ်နေတာပါ။မကြာသေးခင်ကလည်း သူ့ရဲ့လှုမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ အရင်းနှီးဆုံးသူတွေထဲကတစ်ယောက်က ငွေအများအပြားကိုလိမ်ပြီးပြန်မပေးသေးတာကြောင့် စိတ်တွေလည်းထိခိုက်နေတာပါ။
ခုမှာတော့ အဲ့ပိုက်ဆံလေးပြန်ရအောင် ယတြာလေးတွေချေနေတာပါ။ရေချောင်းထဲ ခုန်ချမလို့မဟုတ်ပါနော်.သူများကိုအာမခံပေးပြီးစိုက်ရော်လိုက်ရတဲ့. ဆုံးရှူံးထားတဲ့ ထောင်ချီမကငွေကိုပြန်ရလိုရညား.ယတြာချေနေတာ.လိုအပ်တာ ကိုယ်တိုင်ဈေးထဲသွားဝယ်ရနဲ့ ဘဝမှာ ပါရမီနိုးထချိန် လို့သာဖြေရတယ်ပေါ့လေ.messagerကနေ
တရားသဘောနဲ့နစ်သိမ့်အားပေးကူညီပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်မကျန်အားလုံးကျေးဇူးပါ.ကိုယ်ကသာ အားလုံးရဲ့မျက်နာထောက်ပေမဲ့ ကိုယ့်အပေါ် သောက်ဂရုတောင်မစိုက်နဲ့တော့ ဟုတ်နေပါပြီလေ…လူအချင်းချင်းလည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေ…လူသားအားလုံးအေးငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါ။ Credit
စိုက္ေလ်ာ္ထားရတဲ့ သိန္းေထာင္ခ်ီတဲ့ေငြေတြ ျပန္ရလိုရျငား လုပ္မိလုပ္ရာအကန္ လုပ္ေနမိၿပီဆိုတဲ့ မင္းသမီးႀကီး သိဂႌထြန္း..
တစ္ခ်ိန္က သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကမွာ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေလာက ကေနပရိသတ္အားေပးမႈေတြရရွိခဲ့တာကေတာ့ သိဂ္ီထြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ အေမခန္းေတြမွာ ပီျပင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ယေန႕တိုင္ ပရိသတ္အားေပးမႈေတြနဲ႕ေအာင္ျမင္ေနတာပါ။
သူမရဲ႕ႀကိဳးစားမႈေတြေၾကာင့္လည္း အႏုပညာအလုပ္ေတြနဲ႕ ပိုက္ဆံေတြစုေဆာင္းက စီးပြားေရးေတြကိုလည္းလုပ္ေနတာပါ။မၾကာေသးခင္ကလည္း သူ႕ရဲ႕လႈမႈကြန္ရက္ကေနၿပီးေတာ့ အရင္းႏွီးဆုံးသူေတြထဲကတစ္ေယာက္က ေငြအမ်ားအျပားကိုလိမ္ၿပီးျပန္မေပးေသးတာေၾကာင့္ စိတ္ေတြလည္းထိခိုက္ေနတာပါ။
ခုမွာေတာ့ အဲ့ပိုက္ဆံေလးျပန္ရေအာင္ ယၾတာေလးေတြေခ်ေနတာပါ။ေရေခ်ာင္းထဲ ခုန္ခ်မလို႔မဟုတ္ပါေနာ္.သူမ်ားကိုအာမခံေပးၿပီးစိုက္ေရာ္လိုက္ရတဲ့. ဆုံးရႉံးထားတဲ့ ေထာင္ခ်ီမကေငြကိုျပန္ရလိုရညား.ယၾတာေခ်ေနတာ.လိုအပ္တာ ကိုယ္တိုင္ေဈးထဲသြားဝယ္ရနဲ႕ ဘဝမွာ ပါရမီနိုးထခ်ိန္ လို႔သာေျဖရတယ္ေပါ့ေလ.messagerကေန
တရားသေဘာနဲ႕နစ္သိမ့္အားေပးကူညီေပးေနတဲ့သူတစ္ေယာက္မက်န္အားလုံးေက်းဇူးပါ.ကိုယ္ကသာ အားလုံးရဲ႕မ်က္နာေထာက္ေပမဲ့ ကိုယ့္အေပၚ ေသာက္ဂ႐ုေတာင္မစိုက္နဲ႕ေတာ့ ဟုတ္ေနပါၿပီေလ…လူအခ်င္းခ်င္းလည့္ပတ္ျခင္းကင္းရွင္းၾကပါေစ…လူသားအားလုံးေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာၾကပါေစဆိုၿပီးေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ Credit
“အများကဒီမိန်းခလေးကမကောင်းပါဘူးဆိုခဲ့တာတောင် ကျမနားမှာတစ်ဘဝလုံးပေးဆက်ပြီးချစ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကျမကိုသူလက်ထပ်ခဲ့တယ်”ဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်
ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ လမ်းဘေးခွေးလေးတွေကို လူစားသလို ကောင်းကောင်းကျွေးပြီး နေ့စဉ်ကုသိုလ်ပြုပေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်
အဖြူရောင် အနုပညာရှင်ဟုဆိုသူ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း၏ ကြော်ငြာရုပ်ပုံ ဖယ်ရှားခံရ
ကုန်စိမ်းရောင်းတဲ့ ဘဝကနေ သိန်းပေါင်းလေးသောင်းကျော် လှူနိုင်တဲ့အထိ ကြိုးစားခဲ့သူ